अरुलाई ब्यूझाँउने पाख्रिन आफुभने सधैंका लागि निदाए (भिडीयो सहित) • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
अरुलाई ब्यूझाँउने पाख्रिन आफुभने सधैंका लागि निदाए (भिडीयो सहित)
जनयुद्धका एक योद्धा, पिताका एक इमान्दार छोरा र माओवादी केन्द्रका एक कुशल ब्यवस्थापक प्रकाश दाहालको निधनको घाउ नसुक्दै नेपाली आकासबाट फेरी एउटा अर्को तारा अस्ताएको छ । नेपाली संगीतका एक जाज्र्वल्यमान नक्षत्र, जनतका प्रिय कलाकार खुसीराम पाख्रिन सबैलाई दुःखी बनाउंदै धर्तीबाट अस्ताएका छन् ।
मन थकित भएर अस्ताएका बेला पनि जब खसीराम गुन्जिन्थे मान्छेका मन जुरुक्क उठ्ने गर्दथ्यो । साहुका ऋणले शिर उठाउनै नसकेर निम्छरो जीवन बिताइरहेका दीनदुःखीलाई खुसीरामका गीतहरुले जुरुक्क उचाल्थ्यो । हुने खानेहरुको शासनबाट पिल्सिएर मृत्युसंग जुधिरहेकाहरुले जब खुसीराम सुन्थे फेरी उनीहरुमा उर्जा भरिन्थ्यो र बिद्रोह दन्कन्थ्यो । हो , जनतालाई जगाउने उनै खसीराम गीत गाउंदागाउंदै अस्ताएका छन् ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको श्रद्धान्जली सभा चलिरहेका बेला चितवन बसपार्कमा थप अर्को शोक थपिएको छ । तीनै जनताका कलाकार खुसीराम पाख्रिन कहिल्यै नब्युंझने गरी अस्ताएका छन् । क्रान्तिको उभार शिखरमा पुगेका बेला होस वा टुटफुटले नेपाली कम्युनिष्टहरु खण्डित भएका बेला खुसीरामका रचना फेरी हाल्थे र क्रान्त्रिका विपक्षमा लाग्ने तप्कालाई पाख्रिनको प्रहार सुरु भै नै हाल्थ्यो ।
टुटफुट खण्डितको कुरा नगर,
आत्मसमर्पणको कुरा नगर …..
यही गीत गाउंदै रुकुमको चुनवाङमा खुसीरामका गीत गाइरहंदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित माओवादीका नेताहरु डांको छाडेर रोएका थिए कुनै बेला । राजनीतिले जस्तोसुकै मोड लिए पनि खुसीराम कहिल्यै थाकेनन् । बरु उनले क्रान्ति भुल्न खोज्ने नेताहरुलाई झक्झकाइरहे ।
बगेको नदी सुकेको कहां छ र ?
जनयुद्ध हाम्रो टुङ्गिएको कहां छ र ?
नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति सफल हुनै सक्दैन भन्दै पूंजीवादीहरु र संशोधनवादीहरु कुर्लिरहेका बेला खुसीराम भने कसले भन्छ क्रान्ति यहां सफल हुंदैन भन्दै संगीतका भाकामा सामन्तीहरुलाई थर्काउने गर्दथे ।
कसले भन्छ क्रान्ति यहां सफल हुंदैन…..
खसीरामले भने जस्तै क्रान्तिको बाटो मोडिन सक्छ, दायांबायां चिप्लिन सक्छ । तर क्रान्तिप्रतिको श्रमजीवीहरुको निष्ठा न कहिले दायांबायां चिप्लने छ न त कतै आत्मसमर्पण गर्ने नै छ । हो, आज तीनै जनताको कलाकार सधैंका लागि अस्ताएका छन् । खसीराम अस्ताए पनि उनले गाएको गीतहरु देश र जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुमाझ कहिल्यै अस्ताउने छैनन् । उनी जनताको मन र मस्तिस्कमा सधै जिउंदो ऊर्जा बनेर बांचिरहनेछन् ।